को थिए रेखाका श्रीमान् ? जसले बिहे गरेको एक वर्ष नबित्दै आत्महत्या गरेका थिए | Lifemandu
को थिए रेखाका श्रीमान् ? जसले बिहे गरेको एक वर्ष नबित्दै आत्महत्या गरेका थिए
| सोमबार, ३० असोज, २०७४
एजेन्सी । बलिउड चर्चित अभिनेत्री रेखा उमेरले ६३ वर्षकी भइन् । उनले १० अक्टोबरका दिन आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छन् ।
आफ्नो रूप र अभिनयका कारण सदाबहार नायिकाको छबि बनाएकी रेखालाई धेरैले अविवाहित नै भएको ठान्छन् । कहिले अमिताभ बच्चन त कहिले मिथुन चक्रवर्ती त कहिले अक्षय कुमारसँग रेखाको सम्बन्ध जोडिँदै आउने गरेको छ ।
तर, रेखा विवाहित भएको र उनी पति वियोगमा परेको भन्ने रहस्य हालै खुलेको छ । यासिर उस्मानको पुस्तक ‘रेखा स् द अनटोल्ड स्टोरी’ मा रेखाका निजी जीवनबारे धेरै रहस्य उल्लेख गरिएको छ । रेखाले ३५ वर्षको उमेरमा दिल्लीका व्यापारी मुकेश अग्रवालसँग सन् १९९० मार्च ४ मा बिहे गरेकी थिइन् ।
मुम्बईकै एक मन्दिरमा राति साढे १० बजे मुकेश र रेखाले गान्धर्व बिहे गरेकी थिइन् । तर, बिहे गरेको तीन महिनादेखि नै रेखा र मुकेशबीच सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो । त्यसको सात महिनापछि सन् १९९१ मा मुकेशले आफ्नै घरमा सलको पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए । सो सल रेखाकै भएको बताइन्छ ।
रेखाले मुकेशसँग बिहे गरेपछि नायिका हेमा मालिनी निकै रिसाएकी थिइन् । आफूलाई भेट्न आएका मुकेश र रेखालाई हेमाले ‘अबदेखि यो व्यक्तिसँग मेरो बिहे भएको थियो भनेर कहीँकतै नभन्नू’ भन्ने हेमाले सल्लाह दिएकी थिइन् ।
जवाफमा रेखाले ‘हो मैले यहीसँग बिहे गरेकी हुँ’ भनेकी थिइन् । त्यसपछि पुनः हेमा मालिनीले ‘धनी देखेर तिमीले यस्तो मानिससँग बिहे गरेको हो रु’ भनेर सोध्दा रेखा नाजवाफ भएकी थिइन् ।
विश्वकपमा छनौट भएको एक हप्ता नबित्दै अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षकले दिए राजीनामा
मंसिर ६ । आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलमा छनौट भएको एक हप्ता नबित्दै अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक एन्ज पोस्तेकोग्लुले राजीनामा दिएका छन् ।
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चनको बिहे भएको ११ वर्ष पुगेको छ । यी दुईले एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई २० अप्रिल २००७ मा विहेमा परिणत गरेका थिए । विहे गर्दा अभिषेक ३१ वर्ष र एश्व
श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध खुकुरीको धारमा हिँडिरहेको हुन्छ
काठमाडौँ । मेरो एकजना सेलिब्रिटी साथीकै डिभोर्सको कथाबाट प्रसंग सुरु गर्छु । नाम उल्लेख गर्दिनँ । श्रीमान्–श्रीमती नै सेलिब्रिटी । एक दिन केटीकी आमा बिरामी हुनुभयो । केटीले श्रीमान्लाई गंगाला